Dowladda Itoobiya Oo Xiraysa Safaaraddii Ay Ku Laheyd Dalka Ugu Awoodda Badan Qaaradda Afrika. – Bogga Calamada.com
iyadoo qeyb ka ah dib udhaca weyn ee dowladda Xabashida Itoobiya ay kala kulantay dagaalka sokeeye ee wadankeeda ka holcayay ayay qaadatay go’aan ay ku xirayso safaarad weyn oo ay ku laheyd qaaradda Afrika.
Xukuumadda Addis Ababa waxay qorshaynaysaa in ay albaabada isugu dhufatay safaaradeeda kutaal magaalada Al Qaahira ee caasimadda dalka Masar.
Marcus Tekle oo ah safiirka Itoobiya ee dalka Masar ayaa warbaahinta usheegay in bisha soo socota laxiri doono safaaradooda magaalada Al Qaahira wuxuuna arrinkaas usababeeyay hoos udhaca dhaqaale ee dowladdiisu ay ka wajahayso dagaalka ka socda gobollada Tigray iyo Amhara.
Isagoo wareysi siinayay hay’adda warbaahinta Britain ee BBC ayuu yiri “waxaan qorshaynaynaa in la hakiyay howllihii safaaraddeena ee magaalada Al Qaahira sababa laxiriira dhibaatada maaliyadeed ee nahaysta”.
Dowladda Itoobiya waxay caddeysay in muddada ay xirnaan doonto safaaradeeda Masar ay udhaxayso 3 illaa 6 bilood.
Marcus Tekle ayaa meesha ka saaray in asbaabta ay uxirayaan safaaradooda Al Qaahira ay ku lug leedahay khilaafka ka taagan qeybsiga biyaha wabiga Niil iyo dhismaha biya xireenka Al Nahda.
Tallaabadan lagu xirayo safaaradda xabashida ee Al Qaahira ayaa qeyb ka ah amar uu bilo ka hor soo saaray Abiy Axmed kaasi oo dhigayay in albaabada loo laabo illaa 30 safaaradood oo kuyaal daafaha caalamka.
Labadii isbuuc ee lasoo dhaafayay ayay Addis Ababa xirtay safaaradihii ay ku laheyd waddamo ay kamid yihiin Al Maqrib,Kuwait,Ireland, Al jazaa’ir iyo wadamo kale.
Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay ka sheeganaysaa nuqsaan dhanka bajadka ku baxa diblumaasiyiinta dibadda, dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in xiridda safaaradaha uu dalkan ku leeyahay Al Jazaa’ir iyo Masar ay tahay dhabar jab weyn maadaama labadan dal ay yihiin kuwa ugu awoodda badan qaaradda Afrika islamarkaana uu xifaaltan kala dhaxeeyay Itoobiya.